Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeeray qaar ka mida Dugsiyada ay la wareegtay Wasaaradda Waxbarashada (Sawiro) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeeray qaar ka mida Dugsiyada ay la wareegtay Wasaaradda Waxbarashada (Sawiro)
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeeray qaar ka mida Dugsiyada ay la wareegtay Wasaaradda Waxbarashada (Sawiro)
Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer ku tegay Dugsiga Hoose, Dhexe iyo Sare ee Jabuuti oo ka mida iskuulladii dhowaan ay dawladdu la wareegtay.
Wuxuu Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ku ammaanay hannaanka hufnaanta iyo dhaqsaha leh ee ay iskuulaadka ku gaarsiinayso buugaagta manhajka cusub ee waxbarashada. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo uu wehliyo wasiiru dawlaha waxbarashada iyo tacliinta sare, ayaa mid mid u galay fasallada iskuulka oo ay ka socotay qaybinta buugaagta manhajka ay dhawaan dawladdu daah-furtay, waxa uuna xog-waraystay maamulka iyo macallimiinta iskuulka.
Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya ayaa caddeeyay in dawladda ay ka go’antahay dhaqan gelinta waxbarasho lacag la’aan ah oo leh tayo sare. Ra’iisul wasaaraha ayaa maamulaha iskuulka kula dardaarmay in si hufan loo dhaqan geliyo manhajka si ardayda Soomaaliyeed uga faa’iidaystaan loona dhiso garaadka iyo aqoonta jiilka soo koraya.
XOG: Yaa sameeyay, yaase ka danbeeya Website-ka lagu furtay Magaca Ra'iisal Wasaare Kheyre?
Wakiilka Cusub Q/Midoobay u soo magacawaday Somalia oo yimid magaalada Muqdisho (Sawirro)